Macluumaad lagu kalsoon yahay oo ku saabsan covid-19 iyo tallaalka - Youmo
Pålitlig information om covid-19 och om vaccination - somaliska
Waxa bogga internetka 1177.se aad ka akhrisan kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan calaamadaha uu covid-19 kuu keeni karo, waxaad sameyn karto haddii aad xanuun dareemeyso iyo waxyaalaha tallaalka ku saabsan.
Waxaad Krisinformation.se iyo Folkhälsomyndigheten.se aad ka heli kartaa warbixinta ugu dambeysay ee ku saabsan covid-19.
Macluumaad aad ku kalsoonaan karto
Macluumaadka boggan internetka ku yaala waad ku kalsoonaan kartaa, halkaas ayaan wax kutidhi kuteen ah lagu faafin.
Haddii aanad jawaabaha aad ka raadinayso internetka ka helin, ayaad wici kartaa lambarka macluumaadka ee qaranka113 13.
Waxa wanaagsan in covid-19 la iska tallaalo
Qof la hadal haddii aad welwel dareemayso
Waxa markasta fiican in sidaad dareemeyso qof kala hadasho. Wuxuu noqon karaa qof kugu dhow sida saaxiib, waalid, macalin ama qof weyn oo kale.
Macluumaad la soo ururiyey oo ku saabsan covid-19, 1177 Vårdguiden
Sidan ayaad adiga iyo dadka kaleba uga ilaalinaysaa in aad qaadaan covid-19, Folkhälsomyndigheten
Carruurta: Haddii aad adiggu kawalwalsantahay cudurk Corona fayras
Pålitlig information om coronaviruset, UMO.se
1177 Vårdguiden Rädda barnen